Man United oo soo bandhigtay dalab aan la rumeysan Karin si ay u hesho saxiixa Erling Braut Håland – Gool FM
(Manchester) 20 Nof 2019.Kooxda Manchester United uu hoggaaminayo tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa u muuqata inay ku dhow dahay lasoo saxiixashada weeraryahanka reer Norway iyo naadiga RB Salzburg ee Erling Braut Håland inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo aadan.
Erling Braut Håland ayaa ku jira qaab ciyaareed wanaagsan, isagoo dhaliyay 26 gool, 18 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkaan kooxdiisa RB Salzburg dhamaan tartamada kala duwan.
Weeraryahanka reer Norway ee Erling Braut Håland ayaa lala xiriirinayaa kooxo badan oo qaarada Yurub ka dhisan, kaddib qaab ciyaareedkiisii fiicnaa uu sameeyay kulamadii tartanka Champions League uu kaga soo muuqday xilli ciyaareedkan.
Manchester United ayaa diyaar u ah in 100 milyan euro ay u soo bandhigto kooxda Red Bull Salzburg si ay u la wareegaan gooldhaliyahooda ugu sarreeya ee Erling Braut Håland suuqa xagaaga, sida laga soo xigtay war sidaha “The Guardian” ee dalka England.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan, inkastoo au Manchester United miiska u soo saartay kooxda Red Bull Salzburg qiimo xoogan si ay ula saxiixato Erling Braut Håland, haddana waxay loolan adag kala kulmi doonaan kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus.